Amaseli e-stem ahlukahlukene ezifo ezahlukahlukene > Imibuzo
Can Stem Cell Cure Diabetes?
Kwezinye izimo, ama-MSC aqoqwe kusuka ezicutshini ze-adipose ithandwa kakhulu:
ezimweni lapho ukwahlukaniswa kwamaseli we-hematopoietic stem cell akunakwenzeka noma kungafuneki (ezinye izifo, ubudala, ukuhlukaniswa okuningi okwenziwe ngaphambilini),
kwezifo ezithile (i-vascular, isifo sikashukela mellitus), lapho amaselula ngokwawo enomthelela wemvelo inqubo yokwelashwa
Amaseli we-Adipose Stem
Izicubu ze-Adipose ziyinto etholakala kalula yemvelo uma iqhathaniswa nomongo wamathambo, umthombo oyinhloko wama-MSC. Ama-MSC atholakala kusuka kwezicubu ze-adipose alungele ukusetshenziswa kwe-traumatology and orthopedics, ngoba ahlukanisa kahle amaseli amathambo. Ngaphezu kwalokho, ama-MIP ama-adipose izicubu zomzimba zingavusa ukukhula kwe-vascular ngenxa yokukhuphuka kwe-vascular endothelial grow factor (VEGF), eqinisekisa ukusebenza kahle kokusetshenziswa kwazo ezifweni ezinjenge-ischemia ephansi yemilenze.
Okuthakazelisa ikakhulukazi immunosuppressive Izici ze-MSCs kanye nokusetshenziswa okuhambisanayo kwama-MSC ekwelapheni izimo zokugomela, hhayi nje kuphela njengokuqina kokuthinteka nokusingathwa kohlobo lwesifo sikashukela esingu-1, kepha futhi kujwayelekile njengokuthi, ngokwesibonelo, ukungahambi kahle kokuhlukahluka kobunzima obahlukahlukene. Ama-Mesenchymal stem cell (MSCs) ayaziwa ukuthi akwazi ukuvimbela umsebenzi osebenzayo wama-T-lymphocyte, B-lymphocyte, amaseli we-dendritic cell kanye namaseli wemvelo (NK) amaseli, futhi lolu hlelo lusebenza ngokomgomo wokuphendula.
Konke lokhu kwenza i-MSC ibe yi-ejenti ekwelapheni izifo eziningi ze-autoimmune futhi, okokuqala, I-TYPE 1 DIABETES kubantu abadala nasezinganeni. Isici esibaluleke kakhulu sama-MSCs ukungabi namandla kwawo okuphansi futhi, ngaphezu kwalokho, amandla okucindezela impendulo yomzimba yokuzivikela, ebaluleke kakhulu ekusebenzeni kwazo zonke izinhlobo zokudluliselwa kwe-allogeneic.
Lapho ingeniswa ngaphakathi kwamakhompiyutha noma into emhlophe yobuchopho, amaseli we-mesenchymal stem cell afudukela kwi-parenchyma yezicubu zezinzwa futhi ahlukanise ngokutholakala kumugqa weseli we-glial noma we-neuronal. Ngaphezu kwalokho kunobufakazi be-transdifferentiation of MSCs in hematopoietic stem cell both in vitro and vivo. Ngokuhlaziywa okuningana, ezifundweni ngazinye, ukunqunywa okukhulu kakhulu kwe-MSCs, okuzibonisa ngokwamandla abo okuhlukanisa ama-astrocyte, ama-oligodendrocyte, ama-neurons, ama-cardiomyocyte, amaseli wemisipha abushelelezi namaseli emisipha yamathambo.
Ocwaningweni oluningi emandleni we-transdifferentiation ama-MSCs e-vitro nakwi-vivo, sekutholakele ukuthi ama-proenitors amaningi ama-mesenchymal wemvelaphi yamamongo amathambo ahlukaniswa ngokunqamlezwa emigqeni yeseli eyakha ithambo, i-cartilage, izicubu zomzimba, izicubu zomzimba kanye ne-adipose, kanye nama-tendon kanye ne-stroma esekela i-hematopoiesis.
KHUMBULA, NGESINQUMO SOKWENZA IMISEBENZI EBUSHA YOKUFUNDA I-DIFFERENT TEKKIOLOGI YOKUTHOLA I-CERATER CERATER, IZIBHALO EZIHLANGANISELAYO ZOKUFAKA ISIQINISEKISO (ISIQINISO)
Kusukela ngoJanuwari 2015, ukwelashwa ngamaseli we-stolog cell (we-autologous (uqobo)) athuthukiswe kusuka kwezicubu ze-adipose kuyinto engabizi, inqubo evamile ngaphandle kokuvinjelwa ubudala (okuwukuphela kwesimo ubulukhuni bezicubu ze-adipose).
Ezinye iziguli, vele, zizama ukuthola inketho eshibhile kakhulu yokwenza inqubo futhi "igxume kukhetho olufanayo." Iqiniso ngukuthi ubuchwepheshe abumi. Kunomehluko omkhulu ekwakhiweni kwesiko lamaseli izinyanga eziningana eBelarus noma “khona manjalo” eChina futhi kwanamuhla ngesenzo esifakazelwe eThailand naseJapan. Sivame ukusondela kubantu abanikela ngokuletha amaseli abo etafula ku-vitro abavela eChina naseHong Kong ngaphandle kwepasipoti yeseli. Ngichaza ukuthi amaseli we-stem awahlali endaweni ejwayelekile emazingeni okushisa ajwayelekile. Kunemibandela eqinile yokulima, yokuqothula, yokucwilisa, yokuhamba nokufakelwa kule mithetho ayinakususwa ngokwezigaba.
Udinga ukuqaphela futhi uqale uqiniseke ngenhlangano oxhumana nayo. Sibonisa ngisho neziguli zethu kusikrini se-microscope futhi sinikeza idatha yokuhlukanisa amaqoqo ukuthi la ngamaseli we-stem. Ngani? Kunezibonelo lapho eMoscow, ngaphezu kwenhlangano eqinile enelayisense elinamandla ngisho nelingacabangi ngokuphelele, ithule noma yini ezigulini zayo, kodwa hhayi amaseli we-stem.
Kungakho sikhetha ngokucophelela abalingani hhayi amaphepha, kodwa ukuthola imiphumela. Ungesabi ukubuza! Futhi-ke (hawu, kusebenza ezweni lethu), umzimba womuntu ubhekisisa konke okungeniswa kukho. Ukwethulwa kwesiko elinikelayo, hhayi elokuzenzisa, kungenzeka kulesi sigaba kuphela ngokuqanjwa, uma sifuna ukuthola umphumela ngaphandle kwezinkinga, futhi nangaphezulu ngakho-ke akunangqondo ukusebenzisa amaseli we-stem: isitshalo, isilwane nabanye. Maye, angihlekisi - bayathanda, ngoba ukukhangisa okunjalo kwenzeka ngezikhathi ezithile.
Kulabo abafuna imininingwane ephathelene nokusebenza kwamaseli we-stem kuhlobo 1 sikashukela (hematopoietic):